Puntland oo cagaha galineysa colaad hor leh | KEYDMEDIA ENGLISH
BOOSAASO, Soomaaliya- Walaac iyo wal wal ba'an ayaa hareeyey, halka ay ku biyo shuban doonto xaaladda amni ee dowlad gobleedka Puntland, oo ah midka ugu faca weyn maamullada dalka ka jira, marka laga yimaad Somaliland oo iyadu kal hore gooni isu taag ku dhawaaqday.
Waxaa kala tagay dhamaan masuuliyiintii xalka u raadinayey khilaafkii ka dhashay gacan ku heynta ciidanka PSF, oo ah ciidan loo unkay la dagaallanka argagixisada, kuwaa oo taladooda 20-kii sano ee ugu danbeysay ay gacanta ku hayeen reer Diyaano.
Ilmo Diyaano oo ehel dhaw la ah Deni, ayaa diiday in ay aqbalaan, xil ka qaadistii uu dani ku sameeyey, agaasimihii PSF Maxamuud Cismaan Diyaano, iyagoo oggolaanshaha xilka qaadistana xujo uga dhigay, inuu dani bixiyo dhaqaalihii ka galay reer Diyaano dhismaha iyo qalabeynta ciidankaas.
Waan waantii laga dhex waday, iyaga iyo Dani oo guuldareysatay, ayaa keentay in fariismo hor leh ay PSF ka sameysato Boosaaso, taa oo shacabkii ku noolaa badankood ay barakac ku joogaan duleedka Magaaladaas.
Dani ayaa isna xalka u arka xabad oo qura, waxaana la soo kordhiyey ciidamadii daraawiishta Puntland ee joogay Boosaaso, waxaana cabsida xiisada soo cusboonaatay, ay horseeday in barakacaan dadkii fara ku tiriska ahaa ee ku soo guryo noqday aqalladooda.
Maalmaha soo socda, ayaa la saadaalinayaa in ay Boosaaso, isku fara saaraan, ciidamada kala taabacsan reer Diyaano iyo madaxweynaha maamulkaas Saciid Dani, lagamana hor dhici karo cida ku guuleysan doonto gacan ku heynta magaaladaas, oo ah halka ay PSF ku leedahay saldhigooda ugu weyn Puntland.
Farmaajo ayaa fursad ka helay khilaafkaas, isagoo taageero buuxda oo isugu jirta dhaqaale iyo ciidan siiyey ilmo Diyaano, waana tallaabo uu uga cadgoosanayo Dani, oo ka hor yimid damaciisa keli talisnimada ah.
Qatar ayaa sidoo kale saameyn leh, xiisada ka taagan Boosaaso, sababo la xiriira, in Dani uu xiriir dhaw la leeyahay Imaaraadka Carabta, waana arrinta sii hurineysa xiisada jirta, taa oo maamulkaas ku sababi kart bur bur iyo in ay kala dhantaalanto quwadiisa milatari, oo iminka iska caabisa kooxaha argagixisada ee ku dhuumaaleysta buuraha Galgala.